Famokarana, fanatrehanao sa fahefana anao ny paikadin'ny votoatinao? | Martech Zone
Famokarana, fanatrehanao sa fahefana anao ny paikadin'ny votoatinao?
Iray amin'ireo fampitahana matetika lazaiko amin'ny olona ny fahafahantsika misafidy dia hoe tsy Marketing izahay Jiffy Lube. Ny asanay dia tsy ny fampidirana anao haingana sy amin'ny fivoahana haingana, manipy sticker amin'ny takelaka fitaratra anao ary hahita anao amin'ny volana manaraka. Izahay dia betsaka kokoa amin'ireo ekipa ao an-davaka no manomana ny fiara hiatrika ny hazakazaka. Betsaka ny Jiffy Lubes any - tsy te ho anisan'izy ireo izahay.
Raha miresaka momba ny atiny dia manome andalana famokarana ho anao ireto masoivoho ireto. X isan'ny paositra isam-bolana, X isam-panamasoara fotsy, isa infografika X amin'ny vidiny X dolara. Manomboka ny fifanarahana ary mamokatra izy ireo. Izy ireo dia karama amin'ny vokatra sy ny faharetan'ilay tetikasa tsy misy fiheverana hoe handresy amin'ny hazakazaka ianao na tsia.
Hitanay fa betsaka ny orinasa misoratra anarana amin'ity paikady ity satria - voalohany - misy mpanoratra an-taonina maro any izay maniry asa fivelomana maharitra ary - faharoa - tsy afaka namokatra ny atiny anatiny izy ireo ary nahafantatra fa very ho an'ireo mpifaninana aminy. Mampalahelo fa satria tsy mijery ny fahombiazan'ny atiny izy ireo, dia resy foana.
Fomba fisainana milahatra tsy misy tambiny fampiasam-bola. Andalana fivoriambe misy vokatra antonony.
Ny paikady faharoa hijerentsika maso ny masoivoho maro dia ny anjara amin'ny feo or fisian'ny tranonkala tetik'ady. Ity iray ity dia misy ny atiny sy ny fampiroboroboana, miaraka amin'ireo lalàna mifehy fa afaka manana bebe kokoa amin'ireo fitarihana miditra ianao raha manoratra bebe kokoa fotsiny ary mampiroborobo azy bebe kokoa. Aiza… very maina fotsiny ny fotoana. Azo antoka fa ny fitomboan'ny anjaranao amin'ny feo dia hitarika anao bebe kokoa. Tsy mba paikadin'ny famokarana sy fampiroboroboana faobe mihitsy aho, fa tsy mahita fotoana lehibe kokoa noho izany.
Fomba fiasa mivantana miaraka amin'ny famerenam-bola madiodio. Tsipika fivoriambe haingana kokoa miaraka amin'ny vokatra antonony mitovy amin'izany.
Fahefana momba ny atiny
Ahoana raha tsy mahay manoratra atiny kely kokoa misy dikany kokoa ianao, mampiroborobo azy, ary mampitombo ny fangatahana haingana? Izany no antony nampivelaranay ny fomba fanatonana fahefana miaraka amin'ny mpanjifa. Tsy ny fanafainganana ny tsipika fivoriambe ary ny famafana solika. Manangana ny fiara mihazakazaka izy ary avy eo misintona azy any an-davaka isaky ny tsy mahazo mitarika ianao.
Fomba iterenana io miaraka amin'ny fitomboan'ny vola azo amin'ny fampiasam-bola. Izy io dia tsipika fivoriambe miadana miaraka amin'ny vokatra premium izay mivarotra tsara kokoa.
Omaly aho nanatrika ny Conference Data Big eto Indianapolis. Ny mpanatrika dia mpanjifa iray izay notompoinay nandritra ny taona maro mandra-pahatongany nitantana fitantanana marketing vaovao. Io mpitantana marketing io dia nanana ambadika momba ny fitantanana hetsika ary nijery ny tranokala ho toy ny brochure bebe kokoa fa tsy sehatra fivarotana miditra. Notapahany ny fifandraisanay ary very ny fahefany taty aoriana tamin'ny alàlan'ny fikarohana sy sosialy.
Na eo aza izany dia nilaza ilay mpivarotra avy amin'ny orinasa fa tsy isalasalana fa andian-tsary infographic izay novolavolainay ho an'ny orinasa 3 taona lasa izay no loharano niavian'izy ireo matanjaka indrindra amin'ny alàlan'ny tranonkala. Izay ilay karazana programa resahintsika eto. Mandoa vola bebe kokoa ianao anio, saingy mahazo valiny tsara kokoa exponentially rehefa mandeha ny fotoana!
Tags: fahefana ao anatyfisian'ny atinyfamokarana atinypaikadin'ny atinyandian-tsary infographicfisian'ny tranonkala
Buzzoole: manaova fanentanana miaraka amin'ireo mpisolovava marika sy mpanentana
May 9, 2015 amin'ny 5: 45 AM
Tranokala Douglas tsara, miaraka amin'ny fampahalalana ilaina maro.
Vao avy nisoratra anarana tamin'ny mailaka nataonao isan-kerinandro.
May 11, 2015 ao amin'ny 3: 48 PM